Dowlada KMG oo Dib u dejin ku sameyneyay Barakacayaasha Muqdisho (Sawiro) – SBC
Dowlada KMG oo Dib u dejin ku sameyneyay Barakacayaasha Muqdisho (Sawiro)
Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa dib u dejintii ugu balaarneyd u sameysay maanta dad barakacayaal ah oo ka mid ah kuwo maalmihi ugu dambeeyay ku soo qululayay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya.
Dib u dejintan ayaa loo sameeyay qoysas barakacayaal ah oo muqdisho soo gaaray maalmihii ugu dambeysay kuwaas oo ka soo cararay dhibaatooyin badan oo ay u geysatay abaar ba’an oo ku habsatay deegaanadii ay ku dhaqnaayeen .
Dadkan barakacayaasha ah ayay dowlada KMG ah uga sameysay xero lagu magacaabo Buulo qaran gudaha degmada Dharkiinlay ee magaalada Muqdisho, waxaana la arki karay dadka barakaca yaasha ah oo lagu daabulayo gawaarida noodyadooda waaweyn kuwaas oo lagu geynayay halka dib u dejinta loogu sameeyay.
Masuuliyiin iyo madax sar sare ayaa ka qeyb galay dib u dejintaasi iyadoo ay ku soo aadeyso dib u dejinta dadkan loo sameynayo xili magaalada Muqdisho uu maanta soo gaaray isku dubaridaha xafiiska bin’aadan nimada Qaramada Midoobay mark bowdhan, kaas oo arimaha uu u yimid Muqdisho lagu sheegay in ay ugu horeyso arinta u kuurgalka dadka barakacayaasha ah ee ku dhibaateysan Muqdisho.
Weli waxaa soconeysa Dib u dejinta dadkaasi loo sameynayo waxaana wixii ku soo kordha aad kala socondoontaan wararkayaga dambe.